ဆက်သွယ်ရေး | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဆက်သွယ်ရေး. Show all posts
မှတ်ပုံ မတင်တဲ့ ဖုန်းဆင်းကတ်တွေကို ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှာ အပြီး ပိတ်သိမ်းမယ်
လာမယ့် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ခြင်း မရှိတဲ့ ဖုန်းဆင်းကတ်တွေကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး အပြီး ပိတ်သိမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ နောက်ဆုံး ထားပြီး မှတ်ပုံတင် ကြဖို့နဲ့ မှတ်ပုံ မတင်သေးရင် ဆင်းကတ်တွေကို ယာယီ ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ကြေညာ ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဇွန်လ ၃၀ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ ဆော်သြ ထားပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/39796/
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်ရေး, ပြည်တွင်းသတင်း
တယ်လီနောက ထိုင်းနှင့် မလေးရှားသို့ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု စတင်
ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တယ်လီနောသည် ထိုင်းနိုင်ငံdtac မိုဘိုင်း ဖုန်းလိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ digi ဖုန်းလိုင်း များသို့ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့် ပြုခဲ့သည်။
ပုံမှန် အားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ဖုန်းလိုင်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ် ၂၀၀ ကျပ် ကျသင့်သော်လည်း တယ်လီနောက ပရိုမိုးရှင်း အနေဖြင့် အသံခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်၊ စာတိုပေးပို့မှု တစ်စောင် ၁၅ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်း လျှော့ချခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံသို့ လျှော့ဈေးဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက 500 သို့ CLIDD ဟု ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ကိမ်ပေးပို့မှုအတွက် ရက်ပေါင်း ၃၀ သက်တမ်းရရှိမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းခ ၂၀၀ ကျပ်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောက ကြေညာခဲ့သည်။
တယ်လီနောနည်းတူ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် ထိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဖုန်းလိုင်းများကို အသံခေါ်ဆိုမှု တစ်မိနစ် ၅၀ ကျပ် စာတို ပေးပို့မှု တစ်စောင် ၁၅ ကျပ်ဖြင့် မေလအတွင်း ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ရက် ၃၀ကြာ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် *2050# သို့ခေါ်ဆို၍ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းခ ၁,၀၀၀ ကျပ်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းက ကောက်ခံခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေ တာသုံးခုလုံးသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ဆက်သွယ်ခေါ် ဆိုခကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀၀ ကျပ် ကောက်ခံသော်လည်း ပြည်ပခေါ် ဆိုမှု ဈေးနှုန်းလျှော့ချမှုအဖြစ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် တယ်လီနောက အပြိုင်ဈေးနှုန်း လျှော့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ပုံမှန်စာတိုပေးပို့မှုကို တစ်စောင်လျှင် ၃၀ကျပ် ကောက်ခံလေ့ရှိသည်။
From :7Day daily news by: မြင့်ကျော်လှိုင်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/99592
မိုဘိုင်း အင်တာနက် အမြန်နှုန်း ကူညီ တိုင်းတာပေးရန် MIDO အဖွဲ့ တောင်းဆို
အင်တာနက် မြန်နှုန်း တိုင်းတာသည့် NetRadar အသုံးပြု နေပုံ ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင် (အမရ ပူရ)
နိုင်ငံ အများစု၌ မိုဘိုင်း အင်တာ နက် ဝန်ဆောင်မှုသည် ကြော်ငြာ ထားသည့် အတိုင်း ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသဖြင့် မိုဘိုင်း အင်တာနက် အ မြန်နှုန်းကို ကူညီ တိုင်းတာ ပေးရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည့် MIDO က တောင်းဆို ထားသည်။
လူအများစုပါဝင်သည့် စစ် ဆေးမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအ တာအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ရန် MIDO က တိုက်တွန်းထား ပြီး အစိုးရအပါအဝင် သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသုံးပြုသူ များအနေဖြင့် အင်တာနက်အမြန် နှုန်း အပြည့်အဝရခြင်း၊ မရခြင်း ကို အမြဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သင့် ကြောင်း MIDO က အကြံပြုသည်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက်အမြန် နှုန်းတိုင်းတာခြင်းကို #Better Internet ဟု အမည်ပေးထားပြီး ပါဝင်ကူညီလိုသူများအနေဖြင့် NetRadar အမည်ရှိ အက်ပလီကေး ရှင်းကို အသုံးပြုစေလို ကြောင်း၊ လေးရက်နှင့် အထက် စစ် ဆေးပေးသူများကို အမှတ်တရ တီရှပ် လက်ဆောင်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မတိုင်မှီ တစ်ပတ် နှစ်ကြိမ်နှင့် အထက် စစ် ဆေးပေး သူများကို iPhone7plus အနီရောင် တစ်လုံး မဲဖောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း MIDO က ကြေညာ ခဲ့သည်။
ပါဝင်ကူညီလိုသူများသည် Play Store ၌ NetRadar Mobile Speed Test အက်ပလီကေးရှင်း ကို ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး (ios ဖုန်းများ အတွက် itunes တွင် ရယူနိုင်) မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို ဖွင့်ကာ အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာရမည်ဖြစ် သည်။ မိမိတိုင်းတာရရှိသည့် အင် တာနက်အမြန်နှုန်းကို Screen-shot ရယူ၍ MIDO ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေ့ခ်ျသို့ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိုဘိုင်းအင်တာ နက်အမြန်နှုန်းကို ကူညီတိုင်းတာ ပေးသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် အမည်နှင့် မြို့အမည်များကိုပါ တစ်ပါတည်း ရေးသား၍ ပြန်လည်
ပို့စေလိုကြောင်း၊ #BetterIn-ternet ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင်ခြင်း အားဖြင့် ကြော်ငြာများအတိုင်း မိုဘိုင်းအင်တာနက် အမြန်နှုန်း ကောင်းမွန်ခြင်းရှိ၊ မရှိ ပြန်လည် သိရှိလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း MIDO က ကြေညာခဲ့သည်။
#BetterInternet ကမ်ပိန်း ကို MIDO နှင့် သီရိလင်္ကာအခြေ စိုက် LIRNEasia အဖွဲ့တို့က စီစဉ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တယ်လီနော၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အသစ်မိတ် ဆက်သည့် 4G အင်တာနက်အ မြန်နှုန်းသည် 3G ထက် ငါးဆမှ ၁၀ ဆအထိ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ဒေါင်းလုတ်အမြန်နှုန်းမှာ တည်နေရာပေါ်မူ တည်၍ 20Mbps မှ 40Mbps အထိ ရရှိသည်ဟု သိရသည်။
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/99590
အမ်ပီတီရဲ့ 4G/LTE ဝန်ဆောင်မှုအသစ် စတင်၊ ဆင်းမ်ကတ်တွေ လဲလှယ်နိုင်
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၀ – အမ်ပီတီ အနေနဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက် လိုင်း အမြင့်ဆုံး 4G/LTE ဝန်ဆောင်မှုကို သည်ကနေ့မှာ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနက သတ်မှတ် ထားတဲ့ 1.8 GHz လှိုင်းစဉ်နှုန်း အသုံးပြုခွင့်နဲ့ အတူ 1.8 GHz ကွန်ရက်ကိုသည်ကနေ့ ၃၀ ရက်နေ့မှာ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
MPT – KSGM Joint Ope-rations ၏ အမှုဆောင် အရာရှိ ချုပ် ဖြစ်သူ Mr.ToshitakeAma-miya သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ အခုလို 4G/LTE နည်းပညာက ယူ ဆောင် လာတဲ့ မြန်ဆန်ပြီး အရည် အသွေးရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါ၊ ဒေတာတွေကို အချိန် တစ်ခဏအတွင်းမှာ ဒေါင်းလုပ်ဒ်ဆွဲနိုင်မယ့်၊ ဂိမ်းတွေကိုလဲ တကယ့်ကို အဆင်ပြေပြေ ကစားနိုင်မယ့် အတွေ့အကြုံတွေ၊ HD ဗီဒီယိုတွေကိုအလျင်မြန်ဆုံးမျှဝေနိုင်ပြီး အွန်လိုင်း ကအချက်အလက် တွေ ကိုလဲ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့အတူအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ် ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ colorful data pack အစီအစဉ်နဲ့ ပုံမှန် သုံးဒေတာနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားတွေမှာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ နဂိုဈေးနှုန်း တွေအတိုင်းပဲ 4G/LTE ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လိုံ့Mr.Amamiya က ပြောပါတယ်။
အမ်ပီတီ ပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ မိုဘိုင်းဒေတာ အမြန်နှုန်းကို ကနဦးအနေ နဲ့ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး မြို့ကြီးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တော့ မှာဖြစ်ပြီး အခြားမြို့တွေမှာလည်း မကြာခင်မှာ အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LTE ဆိုတာကတော့ Long Term Evolution ကိုအတိုကောက်ခေါ် ဆိုတာဖြစ်ပြီး 3G ထက် ပိုမြန်တဲ့ဒေတာအမြန်နှုန်းရှိတဲ့ 4G/LTE အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒေတာတွေကိုမြန်ဆန်အောင်လိုင်းဆွဲအား ကောင်းကောင်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ MPT ရဲ့ 4G/LTE ကွန်ရက်ရရှိတဲ့နေရာဆီကို ရောက်ရှိပါက မိမိတို့ရဲ့မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေကနေ 4G/LTE ကွန်ရက်ဆီ အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ရယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြန်ဆုံး ကွန်ရက်အဖြစ် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ထားခြင်းခံရတဲ့ MPT ရဲ့ သရီးဂျီကွန်ရက်နဲ့ အခုစတင်မယ့် 4G/LTE ကွန်ရက်တို့အကြား အဆင်ပြေစွာပြောင်းလဲချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အမ်ပီတီဘက်က ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထား ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဖိုးဂျီစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကိုင်ဆောင် ထားတဲ့အမ်ပီတီသုံးစွဲသူ အားလုံးမှာ 4G/LTE ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် GSM (2G/3G) ဆင်းမ်ကတ်အဟောင်းတွေကို သုံးစွဲသူ ဖြစ်ပါက မိမိတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်အဟောင်းတွေကို မူရင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ ဖိုးဂျီအသင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဆင်းမ်ကတ်အသစ် တွေနဲ့ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေမှာရှိတဲ့ MPT အမှတ် တံဆိပ်ဆိုင်တွေမှာ ဝန်ဆောင်ခ တစ်စုံတစ်ရာပေးဖို့မလိုဘဲ လဲလှယ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သည်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ဖုန်း setting မှာ 4G/ LTE ကွန်ရက်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုရွေး ချယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် - by : မေဘယ်လ်
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်ရေး, ပြည်တွင်းသတင်း, အော်ပရေတာ
မြန်မာ-အိန္ဒိယ-ထိုင်း သုံးနိုင်ငံ ဆက်သွယ်မယ့် အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်း နောက်လ စမယ်
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မဂ်ဟာလာရ ပြည်နယ် ကနေ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆက်စပ် သွယ်တန်းမယ့် အဝေးပြေး လမ်း စီမံကိန်းကို နောက်လမှာ စတင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောက်လုပ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်း စတင် တော့မယ့် အကြောင်းကို မေလ ၃၀ ရက်နေ့ က အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမှာ အိန္ဒိယ ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး နီတင် ဂါတ်ကာရီ က မီဒီယာ သမားတွေကို ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အဲဒီ စီမံကိန်းဟာ အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသတွင်း ကူးလူး ဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန် တိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး နောက်လ ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘက်က စတင် ဆောက်လုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/37423/
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်ရေး, နိုင်ငံတကာသတင်း, မြန်မာရေးရာ
အူရီဒူးရဲ့ သောကြာနေ့ အထူးအစီအစဉ်
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၇- အူရီဒူး မြန်မာမှ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ Easy Top Up ကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းငွေဖြည့် ပါက ငွေဖြည့် အပို လက်ဆောင် ပမာဏ ပိုများစွာ ရရှိမယ့် သောကြာနေ့ အထူး အစီ အစဉ်ကို သည်ကနေ့မှာ စတင် မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာ နေ့တိုင်းမှာ Easy Top Up ကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းငွေ ဖြည့်သွင်း ပါက ဖုန်းငွေဖြည့် အပို လက်ဆောင်တွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကျပ် ၁၀ဝ၀ ကနေ ကျပ် ၂၉၉၉ အတွင်း ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ငွေဖြည့်တဲ့ ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖုန်းငွေဖြည့် အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ကာ ကျပ် ၃၀ဝ၀ နဲ့ ကျပ် ၄၉၉၉ အတွင်း ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ငွေဖြည့်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျပ် ၅၀ဝ၀ နဲ့ အထက် ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ငွေဖြည့်တဲ့ ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Easy Top Up နဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့်တာကြောင့်ရရှိတဲ့ ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို အူရီဒူး အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုတာတွေ၊ စာပိုပေးပို့တာတွေ၊ ကျသလောက်သုံး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲဖို့သက်တမ်းမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ သန်းခေါင်ယံအချိန်အထိဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
အမေရိကန်က ဂြိုဟ်တုကို ငှားရမ်း သုံးစွဲ သွားမည်ဟု ဒုဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးပြော
မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံက လွှင့်တင် ထားတဲ့ ဂြိုဟ်တုကို ငှားရမ်း အသုံးပြု သွားမယ်လို့ ပို့ဆောင် ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးက ပြောပါတယ်။
မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး လွှတ်တော်အပြီးမှာ ဒုဝန်ကြီးက အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“လောလောဆယ်ကတော့ ကျနော်တို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Satellite ငှားရမ်းပြီးတော့ Myanmar Sat အနေနဲ့ စပြီးတော့ သုံးမှာ။ ဒါက ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုပေါ့။ ဒီဟာကလည်း ငှားရမ်းတဲ့ သဘော။ ကျနော်တို့ ကွန်ဒိုတခုမှာ အခန်းတခန်း ပိုင်သွားတဲ့ သဘောပေါ့။ သေချာတာကတော့ ကိုယ်နာမည်နဲ့ပေါ့။ အမေရိကန်ကနေ ငှားရမ်းသွားမှာပါ”
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအပြင် စိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး၊ မြေပြင်လေပြင်တိုင်းတာရေးကဏ္ဍတွေအတွက် ကိုယ် ပိုင်ဂြိုဟ်တုတခု လွှင့်တင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုလွှင့်တင်နိုင်ရေး ဒုတိယသမ္မတအပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးပါဝင်တဲ့ ကော်မတီ တခုဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် ဒါကနိုင်ငံတော် ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်တာမဟုတ်သေးဘူး။ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ အားလုံးနီးပါးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်တု လွှင့်တင်ထားတာရှိကြတယ်။
ဂြိုလ်တုဆိုတာက ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေပြင်တိုင်းတာရေး၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ဂြိုလ်တု အမျိုးအစားတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ပြည်သူတွေ အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဂြိုဟ်တု တချိန် ကျရင် နိုင်ငံပိုင်အနေနဲ့ လွှင့်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။”
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ TV ထုတ်လွှင့်မှုတွေအတွက် ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Intelsat V ဂြိုဟ်တုတွေကို အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘတ်ဂျက်လျာထားပြီး အကျိုးအမြတ်ပေါ်မူတည်ကာ နိုင်ငံပိုင်ဂြိုဟ်တုလွှင့်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုစနစ်တည်ထောင်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/207708
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, May 21, 2017 No comments:
တရုတ်က နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ အဆောက်ဦးတွေ ထူထောင်မယ်
တရုတ် တယ်လီ ကွန်မြူ နီကေးရှင်း လုပ်ငန်း စုက နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ အဆောက် အဦး တွေကို အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ တည်ဆောက် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် - ပါကစ္စတန် သတင်း အချက် အလက် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း၊ တရုတ် - လာအို - ထိုင်း နဲ့ တရုတ် - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်းဟာ ပထမ ခြေလှမ်း ဖြစ်ပါ တယ်လို့ တရုတ် တယ်လီကွန်း ဂလိုဘယ် လီမိတက်ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ယူနစ်က CEO မစ္စတာ တိန့်ရှောင်ဖင်က ပြောပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ လာမယ့် ၃ နှစ် ကနေ ၅ နှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/international-news/34725/
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်ရေး, နိုင်ငံတကာသတင်း
မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကို ဧပြီ ၁ ရက်မှာ လိုင်းပိတ်မယ်
မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကို လာမယ့် ဧပြီ ၁ ရက်မှာ လိုင်းပိတ် သွားမယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းကနေ စတင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ကိုလည်း ကြိုတင်သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ရမယ့် ဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကတော့ Ooredoo၊ MPT၊ Telenor ဆင်းကဒ်တွေဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ Ooredoo က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ Telenor နဲ့ MPTကတော့ ၇၀ ကျော် ရာခိုင်နှုန်း မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/29996/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 03, 2017 No comments:
စတုတ္ထမြောက် ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ကျေးလက်ဒေသကို အခြေခံမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သည့် Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd သည် အမျိုးသားပိုင် အော်ပရေတာဖြစ် သည့်အတွက် ကျေးလက် ဒေသများကို အခြေခံ ပြီး ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကွန်ရက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိအောင် လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာ များအားပြော ကြားခဲ့သည်။
MNTC အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်စိုးက ယခုအခါMNTC အနေဖြင့် စတုတ္ထမြောက် ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအဖြစ်Star High Co.,Ltd. မှ ရှယ်ယာ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း၊Myanmar National Telecom Holding Public Ltd. မှ ရှယ်ယာ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်းအစုရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအဖြစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Viettel Global Investment JSC မှ ရှယ်ယာ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းများကို မြို့ပြကျေးလက်နှင့် တောင်ပေါ်ဒေသများပါမကျန် နေရာ အနှံ့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒုတိယမြောက် မြန်မာအမျိုး သားပိုင် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဗီယက်နမ် ချစ်ကြည်ရေး ကို ဖော်ဆောင်သော သဘောဆောင် သည့် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
From : ရှင်းဝှာ-မြန်မာ
Originally published at - http://xinhuamyanmar.com/myanmar/science-technology/8601-2017-01-15-04-28-35.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, January 15, 2017 No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ တစ်နေ့လျှင် ရထားစီး ခရီးသည် တစ်သိန်းနှစ်သောင်း ကျော်ရှိ
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာ အရ တစ်နေ့လျှင် ရထားစီး ခရီးသည် တစ် သိန်း နှစ်သောင်းကျော် ရှိကြောင်း မြန်မာ့ မီးရထား တိုင်းအမှတ် (၇) သွားလာရေး ဌာန မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ့ မီးရထား အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ဆဲဖြစ်သည့် အတွက် ရထားစီး ခရီး သည် အရေ အတွက်မှာ သိသိ သာသာ ပြောင်းလဲမှု မရှိသေး
သော်လည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများ ပြီးပါက စီးနင်းသူ ယခု ထက်ပို၍ ပိုမိုများပြား လာနိုင်ကြောင်း ၎င်း တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
မြန်မာ့မီးရထား အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ အမြန်ရထား ၃၈ စင်း၊ စာပို့ ရထား၅၆ စင်း၊ ကုန်တင်ရထား ၅၈ စင်း၊ ခရီးတို ရထား အစင်း ၂ဝ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား ၂၁၅ စင်း စုစုပေါင်း ရထား ၃၈၇စင်းဖြင့် ခရီးသည် များအား နေ့စဉ် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, January 13, 2017 No comments:
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိတဲ့ Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd နဲ့ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ လက်မှတ် ရေးထိုး လိုက်ပါတယ်။
လိုင်စင်ကြေး အဖြစ် Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd အနေနဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးသွင်း ရတယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမျိုးဆွေက ပြောပါတယ်။
လိုင်စင်သက်တမ်းအနေနဲ့ ၁၅ နှစ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အခုစတုတ္ထမြောက် အော်ပရေတာက သူတို့ထက် နောက်ကျပြီးမှ ဝင်တဲ့ အတွက် ဈေးကွက် ရှယ်ယာကလည်း သူတို့ထက်စာရင် နည်းသွားတဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော်က သန်း ၃၀၀ လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဦးမျိုးဆွေက ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ မူဝါဒဖြစ်တဲ့ မိုလ်ဘိုင်းအော်ပရေတာ ၄ ဦး (ပြည်တွင်း အော်ပရေတာ ၂ ဦး)၊ ပြည်ပအော်ပရေတာ ၂ ဦးအရ ဒုတိယမြောက် ပြည်တွင်း (မြန်မာ) အော်ပရေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပအော်ပရေတာတွေဖြစ်တဲ့ Telenor အနေနဲ့ လိုင်စင်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀၊ Ooredoo က သန်း ၁၀၅၀ နဲ့ ပေးသွင်းခဲ့ရပါတယ်။
Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd ရဲ့ ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးက “ကျနော်တို့မှန်းထားတာက လူဦးရေရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို Network လွှမ်းမိုးမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ Network ကွန်ရက်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် တည်ထောင်သွားပြီး အဲဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲ ဝန်ဆောင်မှုကို အကောင်းဆုံး ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးအမြတ်တွေကိုလည်း ပထမသက်တမ်း ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ကို CSR အနေနဲ့ သုံးစွဲပေးသွားမှာပါ။ အဲဒါမှာ ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ Public Location ပေါင်း ၅၀၀၀ မှာ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ Internet Access တွေရအောင် အဓိကထားပြီး အင်တာနက်အခမဲ့ပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဆင်းကဒ် နာမည်ကိုတော့ ရွေးချယ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ 096 တွေနဲ့ ထုတ်ဝေသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆင်းကတ်တန်ဖိုးနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခတွေကတော့ လက်ရှိ အော်ပရေတာတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းအတူတူပဲလို့ ပြောပါတယ်။ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ဖို့ ၁ နှစ်ခန့်ကြာဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/183712
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, January 12, 2017 No comments:
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ယခုလအတွင်း အတည်ပြုမည်
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအား လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်း များကို ယခုလ အတွင်း အပြီးသတ် အတည်ပြု ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ဒါ စိစစ် ရွေးချယ်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးချစ်ဝေက ပြောသည်။
‘‘ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကို တင်ပြပြီး လိုင်စင် လျှောက်ထား တာက အကုန်လုံး ပြီးသွားပြီ၊ ကက်ဘိနက် တင်ဖို့ အတည်ပြု ချက်ပဲ လိုတော့တယ်။
ဒီလထဲမှာပဲ လိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့ အတွက် အပြီးသတ် အတည်ပြုပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု တင်ဒါစိ စစ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မ တီအတွင်းရေးမှူး ဦးချစ်ဝေက ပြောသည်။
စတုတ္ထမြောက်ဆက်သွယ် ရေးအော်ပရေတာကို မြန်မာ့စီး ပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း အပါအ ၀င် ပြည်တွင်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုမှ အစုရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင် နှုန်း၊ ဗီယက်နမ်အခြေစိုက်ဆက် သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Viettel မှ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ရှိပြီးမှသာ ဆက်သွယ်ရေးဝန် ဆောင်မှုများအတွင်း အခြေခံအ ဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
‘‘Nation Wide လိုင်စင်ရပြီး သွားရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေးကွန် ရက်ဖြန့်ကြက်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်း တွေ စတင်လို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ဦးချစ်ဝေကပြောသည်။
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ အဖြစ် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ၅ ဘီလီယံကျော်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စီစဉ်ထားပြီး ကနဦးရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှယ်ယာပါဝင်သည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုထဲမှ အိုင်တီအများပိုင် ကုမ္ပဏီ MTI ဒါရိုက်တာဦးဇော်မင်း ဦးက ပြောကြားထားသည်။
အာရှဒေသတွင်း ဆက်သွယ်ရေး တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီများ၏ သတင်းများကို ဖော်ပြနေသော telecom asia.net ၀က်ဘ် ဆိုက်တွင် Viettel ကုမ္ပဏီ ပါဝင်သည့် စတုတ္ထ အော်ပရေတာ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် စတင်ချိန်၌ 3G စနစ်ဖြင့်သာ မိတ်ဆက်မည် ဖြစ်ပြီး သုံးနှစ် အတွင်း နိုင်ငံ့ လူဦးရေ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ဖြန့်ကြက်နိုင်ရန် ရည်မှန်း ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
From :7day daily - By : နိုင်လင်းအောင်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/80398
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, November 09, 2016 No comments:
SEA-ME-WE5ကေဘယ် သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း ၂၀၁၇ တွင် အပြီး လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်
SEA-ME-WE5ကေဘယ် မလေးရှားတွင် သွယ်တန်းနေစဉ်
ပင်လယ် မျက်နှာပြင် အောက်မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရေး ကေဘယ် သွယ်တန်းခြင်း (SEA-ME- WE 5) လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ၂၀၁၇ ဧပြီတွင် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်မှန်း ထားကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနှင့် ဥရောပ အနောက် ပိုင်းနိုင်ငံများ ပါဝင်သော SEA-ME-WE5လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုသိမ်မြို့ အထိ ကေဘယ် သွယ်တန်းပြီး စီးနေကာ ရန်ကုန်မြို့ အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမျိုးဆွေက ပြောကြားသည်။
‘‘SEA-ME-WE5က ငွေ ဆောင်ကနေယူမှာပေါ့။ ပုသိမ် အထိက ပြီးနေပြီ။ ရန်ကုန်ဘက်ကိုဆက်လုပ်နေတယ်။ အဓိကလုပ် နေတာက ပင်လယ်ထဲမှာလုပ်နေ တာ။ ပင်လယ်ထဲ လုပ်နေတာက ၂၀၁၇ ဧပြီနဲ့ မေလလောက်မှာပြီး မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်’’ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။
SEA-ME-WE5ကေဘယ် လမ်းကြောင်း
အဆိုပါ SEA-ME-WE5လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးချိန်တွင် ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ အတွက် အသံစနစ်သာ မက အင်တာ နက်ဒေတာ စနစ် အတွက်လည်း ကောင်းမွန်
မြန်ဆန် လာရန် အထောက် အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
‘‘အဓိကရည်ရွယ်ချက်က တော့ လက်ရှိအင်တာနက်လိုင်း ကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပဲ။ လမ်းကြောင်းများတော့ ရွေးချယ် စရာရှိတာပေါ့။ အရင်တုန်းက SE-ME-WE3လမ်းကြောင်း တစ်ခုတည်းရှိတယ်။ အဲဒီလမ်းကြောင်း တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် မြန်မာတစ်နိုင် ငံလုံးမှာ အင်တာနက်ဘာမှသုံးလို့ မရတော့ဘူး’’ဟု ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ရှင်းပြသည်။
ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အောက် ဆက်သွယ်ရေး ကေဘယ်သွယ် တန်းခြင်းတွင် စင်ကာပူ၊ မလေး ရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ပါကစ္စတန်၊ ယူအေအီး၊ အိုမန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား၊ အီဂျစ်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်စသည့် နိုင်ငံများ ပါဝင်ပြီး အခြားနိုင်ငံများ၌ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်ပြီးစီးနိုင်ရန် ခန့်မှန်း ထားကြသည်။
From :7day daily - By : ထက်အာကာကျော်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/74848
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, September 07, 2016 No comments:
လက်ရှိသုံးစွဲသူ၏ အမည်ပေါက် မဟုတ်ပါက MPT ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူများ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်
လက်ရှိ သုံးစွဲ သူ၏ အ မည်ပေါက် မဟုတ်သည့် အမ်ပီတီ ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြု သူများ အားလုံး မှတ်ပုံတင်ခြင်း(SIM Registr ation) ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ယခင်က စာချုပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူ ထားသူ များသည် မိမိအမည် ပေါက် မဟုတ်လျှင် ဖြစ်စေ၊ သုံးစွဲသူ ကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်ဖြင့် ၀ယ်ယူ ထားသူ မဟုတ်လျှင် ဖြစ်စေ၊ ထပ်မံ၍ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
‘‘CDMA တွေလည်းမှတ်ပုံ တင်ဖို့လိုပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ စာချုပ်တွင်ပါရှိသောအမည်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုသူအမည်ဖြစ်ပါ က ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ် ပါ။ စာချုပ်ပါအမည်မှာ အခြားသူ အမည်ဖြစ်နေလျင် မိမိအမည်နဲ့ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု အမ်ပီတီကထုတ် ပြန်သည်။
လက်ရှိတွင် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာသုံးခုစလုံးက ဆင်း မ်ကတ်အသုံးပြုသူများအားနီးစပ် ရာ၎င်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ်(Branded Shop)အရောင်းဆိုင် များတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် နှိုးဆော် ထားပြီးအသစ်ဝယ်ယူသူများနှင့် ယခင်ဝယ်ယူထားသူအချို့က လာရောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ် နေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဆင်းမ်ကတ် သန်း၂၀ကျော်၊ အူရီးဒူးကုမ္ပဏီမှ ၈သန်းကျော်၊ တယ်လီနောကုမ္ပ ဏီမှ ၁၆သန်းကျော်ရောင်းချထား ပြီး အူရီးဒူးက ၎င်းတို့၏ အသုံးပြု သူ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ မှတ်ပုံတင် ထားသည်ဟု တရားဝင်ပြောကြား ထားကာ ကျန်ဆက်သွယ်ရေးကု မ္ပဏီနှစ်ခုက စိစစ်နေဆဲ သာဖြစ် ကြောင်း ပြောကြား ထားသည်။
အော်ပရေတာသုံးခုစလုံး သည် အသုံးပြုသူများအတွက် မို ဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ ၀က်ဘ် ဆိုက်တို့မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်ထား သည်။
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်း ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူအားလုံး မှတ်ပုံတင်ရန် ယခုလဆန်းက ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ မတ်လကုန် အထိ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်သူ များကို ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင် မှုရပ်ဆိုင်းမည်ဟု သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။
From :7day daily - By - ထက်အာကာကျော်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73301
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 20, 2016 1 comment:
MPT ရဲ့ ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ယာယီ ရပ်ဆိုင်း
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း(MPT) ၏ သုံးစွဲသူ များ၏ဖုန်းဘီလ် ထဲမှ အလို အလျောက် ဖြတ်တောက် ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် အတွက် ၄င်းတို့၏ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှု များအား ယာယီ ရပ်ဆိုင်း လိုက်ကြောင်း သြဂုတ် ၁၃ ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ကြေညာသည်။
ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ရယူ အသုံး ပြုသည့် စနစ်၏ အားနည်း ချက်ကို အသုံး ချကာ အခွင့်မဲ့ ဝင်ရောက် ပြီး လှည့်ဖြား အသုံးပြု နေသည့် ဖြစ်ရပ် များကို တွေ့ရှိ ခဲ့သောကြောင့် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
MPT အနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသော လှည့်ဖြား မှုများ အတွက် ထပ်မံ စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ် သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက MPT အသုံးပြုသူ အချို့သည် ၄င်းတို့၏ ဖုန်းဘီလ်ထဲမှ အလို အလျောက် ဖြတ်တောက် ခံရခြင်း များနှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရကြောင်း လူမှု ကွန်ရက်နှင့် MPT ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာသို့ တိုင်ကြား ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေသော ကုမ္ပဏီ ငါးခုမှ ထပ်ဆောင်းဝန် ဆောင်မှု အမျိုးအစား ၁၃၄ ခုပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 13, 2016 No comments:
ရေဘေးသင့် ဒေသများသို့ တယ်လီနောနဲ့ အူရီဒူးတို့ အသီးသီး လှူဒါန်း
တယ်လီနောရုံး (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင်/ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်း လက်ရှိ ရင်ဆိုင် ခံစား aနသော ရေဘေးသင့် ဒေသများသို့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများ ဖြစ်တဲ့ တယ်လီနောနဲ့ အူရီဒူး တို့က အသီးသီး ကူညီ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းလျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ရေဘေးသင့် ပြည်သူများကို တယ်လီနောက ၄င်းနဲ့အတူ လုပ်ငန်း လက်တွဲဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း Network Activities Group (NAG) မှတဆင့် အရေးပေါ် အကူအညီများကို ပေးအပ်လျက် ရှိပြီး ယခု အချိန်ထိ မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး များမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၄ ခုမှ ကျေးရွာပေါင်း ၁၃ ရွာမှာ ရှိတဲ့ ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေကို ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ နဲ့ သောက်ရေသန့်များ ပေးအပ် လှူဒါန်း ခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က တံတားဦးမြို့နယ် ပုဏ္ဏားခြံကျေးရွာရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကို အကူအညီများ သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး NAG နှင့်အတူ တယ်လီနော၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေး အရာရှိချုပ် Joslin Myrthong နဲ့ ၀န်ထမ်းအချို့ပါ အတူပူးပေါင်း ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တယ်လီနောရဲ့ အလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၁၆၃၄ ကျော်နဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁ ခုမှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို အရေးပေါ် အကူအညီများကို ဆက်လက် ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းက ရေဘေးသင့် ပြည်သူများ အတွက် ထောက်ပံ့ ကူညီမှုများကို လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အူရီဒူးမြန်မာ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရေဘေးသင့် ဒေသများမှာရှိတဲ့ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် ကျပ်ငွေသိန်း ၂၀၀၀ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှ အူရီဒူးရဲ့ အလှူငွေများကို ရေဘေးသင့် ဒေသများမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၆၀၀၀ အား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ပစ္စည်းများကို ကူညီလှူဒါန်းခဲ့ပြီး ခြောက်သွေ့ ဒေသတွေမှာ ရေရှည်အကျိုးရှိစေမမယ့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိနိုင်ရေးတို့ကိုပါ လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနှစ်ကလည်း အူရီဒူး အနေနဲ့ ရေဘေးသင့် ဒေသများကို သွားရောက်ပြီး အရေးပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများနဲ့ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် အစားအသောက်၊ အမိုးအကာနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များကို ပေးအပ် ကူညီခဲ့ပါတယ်။
“အူရီဒူးမြန်မာရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုများက မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ အတွက် အကူအညီ အထောက်အပံ့ အများကြီး ပြုလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ကနေ ဖြစ်စေတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်သမျှ လျှော့ချပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အနာဂတ် ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာ အူရီဒူးရဲ့ အဓိကရည်ရွက်ချက်ပါ” လို့ အူရီဒူးမြန်မာရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Mr.Rene Meza က ပြောပါတယ်။
Originally published at - http://mobile.irrawaddy.com/lifestyle/2016/08/11/120376.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 12, 2016 No comments:
ဒုတိယလေးလပတ်တွင် အူရီဒူးမြန်မာ၏ တိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်မြင့်
အူရီဒူး မြန်မာမှ ၂၀၁၆ခုနှစ် နှစ်ဝက် ရလာဒ်သစ် များကို ၄င်း၏ ရုံးချုပ် တည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ ပလာဇာတွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရုံးသစ်၏ Town Hall တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် အူရီဒူးမြန်မာ၏ CEO ဖြစ်
သော Mr. Rene Meza က သတင်းမီဒီယာများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များကို ပြီးခဲ့သည့် သုံးလအတွင်းက အူရီဒူးမြန်မာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ရလာဒ်ကောင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းပြပေးခဲ့သည့်အပြင် မီဒီယာများမှ မေးမြန်းသောသတင်းအချက်အလက် များကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂ဘီလျံအထိ ၂၀၁၆ခုနှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းတွင် ထပ်မံတိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူးဆင်းကတ်ကို အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်မြင့်ကွန်ရက်များဖြစ်သည့် 3G နှင့် 4G ကွန်ရက်တို့ကို အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် အူရီဒူး၏ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်သည် အသုံးပြုသူဦးရေကို ယခင်ကထက် ပိုမိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်နှင့် မြန်ဆန်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နိုင်ရန် အူရီဒူးမြန်မာမှ တာဝါတိုင်ပေါင်း ၄၂၃၂ တိုင်ကို စိုက်ထူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ယခု၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်တွင် တာဝါတိုင်စုစုပေါင်း ၄၅၀၀ ခန့် စိုက်ထူပြီးစီးမည်ဟု ရည်မှန်းထားရှိပါသည်။
“ကျွန်တော် တို့ဟာ နိုင်ငံ တကာအဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန် အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ် “ ဟု Mr. Meza မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးတစ်ခုမှာ ၁၁,၅၀၀ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားစွာ ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖိုင်ဘာကွန်ရက်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဖိုက်ဘာကွန်ရက်က်ို ကီလိုမီတာပေါင်း ၁၃,၀၀၀ အထိ ပိုမိုရှည်လျားစွာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို ဖိုက်ဘာကွန်ရက်ကို တိုးချဲ့ ချိတ်ဆက် မည်ဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအရည်သွေးမှာ ယခုထက် သာလွန်ကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Mr. Meza မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် အလွန်ထူးခြားကောင်း မွန်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် 4G ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက် အလက်များကိုလည်း ထပ် မံဖြည့်စွက်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာမှ 4G ကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် စတင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် နှင့် ပုဂံစသည့် ဒေသများတွင် 4G ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူးမှ 4G ကွန်ရက်ဖြင့် အလွန်မြန်ဆန်လှသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို 3G ကွန်ရက်အတွက် ကျသင့်သော အင်တာနက်အသုံးပြုခဖြင့်သာ အူရီဒူး ၀န်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
“’ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 4G ကွန်ရက် ကို မြန်မာနိုင်ငံက မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးချဲ့ခြင်းဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တောက်ပကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ spectrum များကို ထပ်မံချပေးပါက အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် ထပ်မံဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mr. Meza မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အူရီဒူး၏ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော မိုဘိုင်းကွန်ရက်များကြောင့် အူရီဒူးဆင်းကတ် သုံးစွဲသူအသစ်အရေအတွက်သည် ယခု ၂၀၁၆ခုနှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းတွင် ၂.၄သန်း မျှ တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် အူရီဒူးဆင်းကတ်အသုံးပြုသူပေါင်း ၈.၂သန်းအထိ ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အူရီဒူးမြန်မာ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူတွေထဲမှာ မိုဘိုင်းအင်တာနက် အသုံးပြု သူတွေ ပိုမိုများပြားတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို အသုံးပြုသူပမာဏဟာ ယခင်က ထက် နှစ်ဆမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ အူရီဒူးမြန်မာ၏ မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူအားလုံး၏ ၈၀%ဟာ ဆိုရင် အင်တာနက်က်ို အသုံးပြုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လွန်စွာသက်သာသော ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထားများကြောင့် လဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ ယခင်ကထက် နှစ်ဆမြင့် တက်ခဲ့ပါတယ် “ ဟု Mr. Meza မှ ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို လူတိုင်းပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် အူရီဒူးမြန်မာမှ “Smart Series” စမတ်ဖုန်းများကို ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀၀ ဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ စတင် မိတ်ဆက်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်း သို့ ဖြန့်ချီရောင်း ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
စမတ်ဖုန်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန် အူရီဒူးမြန်မာမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးစိုက်ထုတ်၍ ကူညီထောက်ပံ့ပေး ခဲ့ပါသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားမျိုးစုံကို မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ အူရီဒူးရဲ့ အကောင်းဆုံးနှင့် အမြန်ဆန် ဆုံးသော အင်တာနက်နှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကို ရယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရရှိကြပါတယ် “ ဟု Mr. Meza မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ Touch Screen, App Store Access၊ ရှေ့/နောက်ကင်မရာနှင့် ဆင်း ကတ်၂ကတ်ထည့်သုံးနိုင်သည့် စမတ်ဖုန်းများဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကို လည်း အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် အရည်အသွေးအာမခံ သက်တမ်း ၁၂ လ ပါရှိပါသည်။
အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် စမတ်ဖုန်းလောကတွင် ထိပ်တန်းမှ ဦးဆောင်လျှက်ရှိသော နံမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သည့် Samsung ၊ OPPO တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး 3G/4G ကို အသုံးပြုနိုင်သော ဟန်းဆက် များကို မိတ်ဆက်ရောင်းချပေးသည့်အပြင် အခမဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပမာဏကိုပါ ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများကို လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် အူရီဒူးမြန်မာမှ Huawei နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အူရီဒူး 4G ၀န်ဆောင်မှုကို WiFi အဖြစ် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Huawei 4G WiFi Device ကို ဈေးကွက်အတွင်း သင့်တင့်လျောက် ပတ်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ၊ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနှင့် ဝယ်ယူပြီး device ၁၀ခုနှင့် ချိတ်ဆက် ကာ မြန်ဆန်လှတဲ့ 4G ကွန်ရက် အင်တာနက်ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ အူရီဒူးမှ အူရီဒူးအမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀နီးပါကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဖွင့်လှစ် ထားပြီး ဆင်းကတ်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ ၀ယ်ယူခြင်း နှင့် အူရီဒူးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြားသော ၀န်ဆောင်မှု များပါ ရယူနိုင်ပါသည်။
မိုးဘိုင်းအသုံးပြုသူအများအပြား ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အူရီဒူးမှကမ်းလှမ်းလိုက်သည့် စိတ်ကြိုက် နံပါတ်များ၊ နံပါတ်အလှများကိုလည်း အူရီဒူးအမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်များနှင့် အူရီဒူးအမှတ်တံဆိပ်ပါရှိသော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် ဆိုင်ခွဲများတွင် အထူးချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင် ပါသည်။
Mr. Rene မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ Application ၂ခုအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံး application မှာ mJam ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာသီချင်း ပုဒ်ရေ ရာကျော်ကို တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါ သည်။ အဆိုပါ application ကို အသုံးပြုသူများ အကြိုက်တွေ့ကာ သုံးစွဲသူ ပိုမိုများပြားလျက်ပါသည်။
ဒုတိယ application မှာ “My Ooredoo Application” ဖြစ်ပြီး အူရီဒူးဆင်းကတ်ကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အကောင့်မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ခြင်း၊ အင်တာနက် အစီအစဉ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ မိတ်ဆွေများထံသို့ဖုန်းဘီလ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်း စသည်တို့ကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
“အူရီဒူးမြန်မာမှ နည်းပညာကဏ္ဍဦးဆောင် နိုင်သည့် ဆက် သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ခုအဖြစ်လာဖို့အတွက် တကယ်ကို ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေများပြားလာတဲ့အတွက် သူတို့အပန်းဖြေနိုင်စေဖို့ အခုလို တေးဂီတများကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ နားဆင်နိုင်ဖို့ ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ” ဟု Mr. Rene မှ ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အူရီဒူးဆင်းကတ်အသုံးပြုသူများကို ၂၄နာရီ ၇ရက် နေ့စဉ်မပြတ် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင် မှုတွေ ပေးနေတဲ့အတွက် အူရီဒူးမြန်မာ၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတွင် နံပါတ်တစ် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသော စင်တာအဖြစ် Contact Centre World မှ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
“ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာအဖွဲ့သားများမှ သုံးစွဲသူတွေအပေါ် ကောင်းမွန် တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အတွက်ရယ်၊ ဒေသတွင်းမှာ ၀န်ဆောင်မှု အကောင်း ဆုံးပေးနိုင်တာအတွက်ရယ်ကြောင့် လွန်စွာဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသဲနှလုံးနေရာမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သုံးစွဲသူ
သာလျှင်ပထမဟုဆိုသည့် စကားကို လက်ကိုင်ထားပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အတွက် အခုလို ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့ဆုကို ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ” ဟု Mr. Rene Meza မှာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက် စွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အင်တာနက်လိုင်း ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် 2600 MHz လှိုင်းစဉ်နှုန်းကို ဆက်သွယ်ရေးက လေလံတင်မည်
ဆက်သွယ်ရေး ညွှန် ကြားမှု ဦးစီး ဌာနသည် 2600 MHz လှိုင်းစဉ်နှုန်းကို အောက်တို ဘာ ၁၇ ရက်တွင် လေလံတင် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ် ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ခွင့် NFS (I) လိုင်စင် ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီ ၃၅ ခု ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် အထက်ပါလှိုင်း စဉ်နှုန်း 2600 MHz ကို လေလံ တင်ရောင်းချရန် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် တွင် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော မူဘောင်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လေလံကို စိတ်ဝင်စားသော ကုမ္ပဏီများက EoI (Expression of Interest) သို့ သြဂုတ် ၉ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည်ဖြစ် ကြောင်း ယင်းဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့က နယ်မြေ သုံးခုခွဲပြီး တစ်ခုမှာ နှစ်ဦးစီပေး ပါ့မယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လေလံ နှစ်ခုကို အများဆုံး ဆွဲနိုင်တော့ ကုမ္ပဏီ သုံးခုကနေ ခြောက်ခုအ ထိ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ’’ဟု ဆက် သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးဆွေက ပြောသည်။
လှိုင်းစဉ်နှုန်း 2600 MHz သည် အင်တာနက်ဘန်းဝှစ် ပိုမို ကျယ်၍ အင်တာနက်လိုင်းပိုမိုမြန် ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပြုလွှာ (EoI) လျှောက် တင်လာသည့် ကုမ္ပဏီများထဲမှ စည်းကမ်းချက်နှင့်ညီ၊ မညီကြည့် ရှုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအစီအစဉ် များကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆက် သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဟု ဦးမျိုးဆွေ က ပြောသည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်း၌ ဆက် သွယ်ရေးအော်ပရေတာ သုံးခုအ ပါအ၀င် NFS (I) လိုင်စင်ရရှိထားသောကုမ္ပဏီ ၃၅ ခုရှိပြီး 4G စနစ်ကို ပြောင်းလဲနေသော အော်ပရေတာသုံးခုက အပြိုင်အဆိုင် လေလံဆွဲလာဖွယ်ရှိသော်လည်း တယ်လီနောမြန်မာ ကုမ္ပဏီသည် 2600 MHz ထက် 1800 MHz လှိုင်းစဉ်နှုန်းကို ပိုမိုလိုအပ် ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားထား သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ် ငန်း (MPT) အနေဖြင့် အထက်ပါ 2600 MHz လှိုင်းစဉ်နှုန်းကို လေ လံဆွဲရန် စဉ်းစားသုံးသပ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း MPT ၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက7Day Daily သတင်း စာအား ပြောသည်။
2600 MHz လှိုင်းစဉ်နှုန်း လေလံ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုကို လေလံပွဲကျင်းပမည့် အောက်တို ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကြေညာမည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနမှသိရသည်။
From : 7daydaily - By : ထက်အာကာကျော်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/71211